MacOS Mojave 1 Beta ho an'ny daholobe 10.14.1 Azo alaina izao | Avy amin'ny mac aho
Raha fotoana vitsivitsy lasa izay dia niresaka momba ny famoahana ny kinova farany amin'ny watchOS 5.0.1 isika, ankehitriny dia tsy maintsy mizara aminareo rehetra izahay fa ny macOS Mojave 10.14.1 beta ampahibemaso Azo alaina ho an'ireo mpampiasa te-hametraka azy amin'ny Mac azy io izao.
Amin'ny ankapobeny, ireo fanovana vitsivitsy voalohany ataontsika amin'ireo Boky macOS navoakan'ny Apple an'ny macOS, Ny mazava dia tsy mijanona ny tahan'ny pitches. Amin'ity indray mitoraka ity izay ananantsika eo ambony latabatra dia ny kinova ampahibemaso ary azo antoka fa mihoatra ny iray no efa nametraka azy tamin'ny solosaina.
Tadidio fa ankehitriny ireo kinova vaovao an'ny rafitra navoakan'i Apple dia tsy hita intsony ao amin'ny Mac App Store, ankehitriny dia tsy maintsy mankany isika System Preferensi> Fanavaozana ny lozisialy ary eo no hahitantsika ireo kinova vaovao misy. Amin'ity tranga ity, ireo izay manana ny kinova beta napetraka teo aloha dia hahita ilay kinova vaovao.
Raha iray amin'ireo mpampiasa te-handray anjara amin'ny betsa ho an'ny daholobe macOS Mojave ianao, Manoro hevitra izahay ny hampiasa fisarahana ivelan'ny rafitra fiasanao Na dia tena mandeha tsara aza ny zava-drehetra hatrany am-piandohana amin'ireto kinova ireto dia tsy azontsika atao ny mampidi-doza azy io raha io no fitaovana ampiasaintsika. Aza adino fa ny rindranasa, fitaovana na fiasa sasany dia mety tsy mifanaraka amin'ny beta ary noho izany dia mety tsy hahomby na tsy mandeha amin'ny laoniny amin'ireo kinova ireo, ka tsara kokoa raha tsy atao an-doza izany. Na ahoana na ahoana ny rohy hisoratra anarana sy handray ireo kinova beta ampahibemaso ireo alohan'ny ankamaroan'ny mpampiasa avelantsika eto ny rohy fampidinana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Mojave » MacOS Mojave 1 beta beta ho an'ny daholobe efa misy izao
Safari Technology Preview dia havaozina amin'ny andiany 66